Laboratory Glass ekondensa, Isikebhe bobumba, Izinsimbi Billet Imisila - Huida
sula ibhaki enkulu / encane engu-600ml 150ml 2000ml pyr ...
Sula futhi amber grade A Flask Volumetric With ...
I-Yancheng Huida Glass Instrument Co., Ltd.ngumkhiqizi onolwazi, ikakhulukazi ukhiqiza izingilazi zaselebhu ezisezingeni eliphakeme namanye ama-labwares ajwayelekile. Ibhendi yochungechunge lwengilazi ebilayo ye- “YCHD” kanye nezinsimbi zokulinganisa i-volumetric ziyaziwa emhlabeni wonke.
Woza uzofunda ngezintambo ezintathu zibhodlela ...
Woza uzofunda ngamabhodlela amathathu entamo nami Ibhodlela elinemilomo emithathu liyinsimbi ejwayelekile yengilazi yamakhemikhali, esetshenziswa kakhulu ekuhlolweni kwe-organic chemistry. I-flask ezintathu entanyeni ngokuvamile has t ...
Uyemukelwa bonke abathengi abahle baxhumana ...
Uyemukelwa bonke abathengi abahle bakhulume ngemininingwane yezixazululo kanye neMilinganiselo yePipette imibono nathi !! Akunandaba ukuthi umthengi omusha noma umthengi osekhulile, Sikholelwa emabintweni amade kakhulu nakubudlelwano obunokwethenjelwa ...
Ukwazi ukuhlukaniswa ngeflaskhi, utili ...
Ukwazi ukuhlukaniswa ngeflask, ukusetshenziswa, indlela yokusebenzisa kanye nezindaba ezidinga ukunakwa okukodwa. Ukwahlukaniswa ngeflaskhi Iflaskhi esetshenziswa ngokujwayelekile inebhodlela eliyindilinga elingezansi, iflask engezansi eyisicaba ne-distillation fl ...
Izinzuzo zokwahlukanisa ifanele Izinzuzo: Ukuvela nokumiswa kwempendulo kungalawulwa. Ukwehlukaniswa ifanele luhlobo lwesitsha sokuhlola ingilazi, ikakhulukazi sihlobene ne-separati ...
Ukuhlaziywa komthelela we-COVID-19 ku ...
I-Borosil Glass Works Ltd., i-Corning Inc. ne-DWK Life Sciences GmbH izoba ngabadlali abakhulu emakethe ye-glassware ne-plasticware kusukela ngo-2021 kuya ku-2025 I-glassware glassware ne-plasticw ...